लोनमा किनेको गाडी थन्कियो ? या बिग्रेर बनाउने पैसा भएन ? अब लिनुस् सस्तोमा ऋण - Arthapage
लोनमा किनेको गाडी थन्कियो ? या बिग्रेर बनाउने पैसा भएन ? अब लिनुस् सस्तोमा ऋण
प्रकाशित मितिः ४ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:४९ August 20, 2020
सार्वजनिक गाडी किनेर जीवन गुजारा चलाउँदै आउनुभएको छ ? ४ महिनासम्म गाडी कुदाउन नपाएर गाडीको सर्भिस गर्नेसम्म पैसा छैन ? या लामो समयसम्म थन्क्याएर बिग्रियो र फेरि संचालन गर्न समस्या भयो ? त्यसो हो भने तपाईंले अब धन्दा नमान्नुस् ।तपाईंहरू जस्तैलाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत मात्रै ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएकाे छ । जुन पुनर्कर्जाले तपाईंकाे घाटामा गएको व्यवसायले फेरि नयाँ जीवन पाउनेछ ।
बैंकबाट त गाडी नै लोनमा निकालेको अब बैंंकले कुन कर्जा दिन्छ र ? भन्ने तपाईंलाई लाग्न सक्छ । साना व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर राष्ट्र बैंकले कर्जा लिएकाहरूलाई पनि थप कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई पुनर्कर्जा भनिन्छ । यसरी तपाईंले थोरै ब्याजदरमा कर्जा लिएकै बैंकबाट पुनर्कर्जा लिन सक्नुहुनेछ ।
यसरी लिन सकिन्छ
त्यस्तै, एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा एक बैंक/वित्तीय संस्थामार्फत मात्र आवेदन भएको व्यहोरा आवेदकले सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
प्रकाशित मितिः ४ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:४९ |
Prevसुधार गर्न नसकिएपछि क्रिस्टल फाइनान्स खारेज गर्ने निर्णय
Nextदाङ्गमा दुई सहकारी मर्ज